Maxaan ka naqaanaa Kooxda ADF ee dagaalka kula jirta Uganda | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxaan ka naqaanaa Kooxda ADF ee dagaalka kula jirta Uganda
Maxaan ka naqaanaa Kooxda ADF ee dagaalka kula jirta Uganda
Kooxda Allied Democratic Forces (ADF) ayaa hadalhayn badan ka abuurtay dalka Uganda, ka dib qaraxyadii mataanaha ahaa, ee ay shalay ka gaysatay magaalo madaxda dalkaasi ee Kampala. Tani ayaana astaan u noqotay inay kooxdu kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah Uganda, ka dib qaraxyadii bishii hore ka dhacay dalkaasi.
ADF oo koox argagixiso uga diiwaangishan dalka Uganda ayaa sanadkii 2017 xiriir la yeelatay dowladda isku magacawday Khilaafada Islaamka ee Daacish.
Musa Baluku ayaa sanadkii 2015 noqday hoggaamiyaha kooxdan, wax yar uun ka dib markii hoggaamiyihii hore ee kooxdaasi, Jamil Mukulu lagu xiray dalka Tanzania, kuna eedeysan gabood-falo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Musa Baluku ayaa la fahamsan yahay inuu yahay ninka ADF hoos geeyay Daacish, iyadoona ay Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Congo kaga dhawaaqeen cilaaqaadka ay la yeesheen Daacish. Tan iyo intii ay ADF xiriirka la yeelatay Daacish waxay weerarada ugu badan ka gaysatay Bartamaha Afrika.
Maleeshiyada ADF waxay u badan yihiin kuwo ka soo jeeda dalka Uganda, inkastoo saldhigyadooda ay ku yaallaan Congo.
Daahir Qoriyow Isaaq oo ka faalllooda Arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika ayaa sheegaya in kooxda ADF ay u badan yihiin Ciidamada Dowladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Idi Amin Dada, kana horyimid xukunka Madaxweyne Yoweri Museveni.
“Qoladan ADF waa koox ay Dowladaha Uganda, Congo iyo Reer Galbeedka u aqoonsan yihiin koox argagixiso, aasaasmay sanadkii 1990, ku bilowday marka hore dad ka andacoonaya Dowladda Uganda. Waxaana badi lagu saleeyaa qoladii Idi Amin Dada askartiisii qaar, oo Museveni markii uu qabsaday ka dib dhinac uga baxay.” Ayuu yiri Daahir Qoriyow Isaaq oo BBC la hadlay.
Waxa kaloo uu yiri “Intaan ka naqaano hadda, daraasaadkii la sameeyay tiradooda ama ciidankooda, ciidan hadda aad u badan maaha, illaa iyo boqolaal baa la sheegaa, daraasaadka qaar saddex boqol bay sheegayaan, qaarna shan boqol bay sheegayaan, mar bay illaa lixdan soo gaareen, wayna kala jabeen markii Daacish lagu dhawaaqay ka dib.”
Daahir Qoriyow ayaa yiri “Waxay hadda u badan yihiin Bariga Congo, oo meesha ayuu fadhigoodu yahay, dhaqdhaqaaqooduna wuxuu ku badan yahay wadanka Uganda.”
Waxa uu intaa ku daray “Dad maka hore siyaasadda Uganda aan ku qancin bay ahaayeen oo is bedel doonayay, ka dib ku milmay arrimihii gobolka, maadaama ay Congo deggeen, waxaa lagu xamanayay in aasaaskooda hore ay maalgelisay dowladdii hore ee Suudaan ka jirtay, marka waa uun siyaasad, laakiin iminka kooxdii mabaadii’ fara-badan baa isaga darsamay.”
Mar wax laga weydiiyay xiriirka ADF kala dhaxeeya Daacish ayaa sheegay inaanay taasi kala caddeyn, balse ADF ay Daacish ka soo minguurisay weerarada, sida qaraxyada oo kale.
“Waxyaabaha ka dhaxeeya ayaga iyo Daacish lama caddeyn karo.” Ayuu yiri Daahir Qoriyow oo intaa raaciyay “Laakiin waxyaabaha ay Daacish isaga mid yihiin waxaa ka mid ah qaraxyada ay samaynayaan, goobaha dadka aan Muslimiinta ahayn oo la beegsanayo, goobaha dowladda oo la beegsanayo, goobaha is qarxiska iyo bamka lagu hayo, waxaas bay ka metelaan.”
Qariyow ayaa ku waramaya “In dhaqaale ahaan iyo mabda’ ahaan ay ku xiran yihiin Daacish, daraasaad caddeynaysa ma jirto, laakiin dabeecadahooda, sida ay u dhaqmayaan iyo dhawaaqii ay ku dhawaaqeen inay ka mid yihiin ayaa tusaysa inay ka mid yihiin Daacish ama aysan kala ahayn.”
Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni ayaa ku hanjabay inay dowladiisa qaadeyso hawlgalo sida uu sheegay lagu ciribtirayo ADF.
Madaxweyne Museveni ayaa sheegay inay kooxdani ku bartilmaameedsan doonaan halka ay jooggaan iyo fariisimahoodaba.
Previous articleMadaxweyne Museveni oo u hanjabay kooxdii qaraxyada ka gaysatay Kampala
Next articleRag Shabaabnimo loo haysto oo lagu qabtay Magaalada Garbahaarey
Doorashada ka socoto Garoowe oo 2 Xildhibaan lagu doortay